श्रीमानले अलपत्र छोडेकी सुत्केरीका लागि मासु बोकेर पुगिन् ऋषी धमलाकी पत्नी एलिजा,(भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/श्रीमानले अलपत्र छोडेकी सुत्केरीका लागि मासु बोकेर पुगिन् ऋषी धमलाकी पत्नी एलिजा,(भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमानले अलपत्र छोडेकी सुत्केरीका लागि मासु बोकेर पुगिन् ऋषी धमलाकी पत्नी एलिजा,(भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । ऋषी धमलाको पत्नी तथा नायीका एलिजा गौतम खानेकुरा लिएर एक जना सुत्केरी महिलालाई भेट्न गएकी छन् । भर्खरै सुत्केरी भएकी महिला भोकै रहेको खबर पाएपछि उनी सुत्केरी मसला, मासु, चामल, अण्डा लगायतका बस्तु लिएर पुगेकी हुन् । सुत्केरी भएदेखि नै खान नपाएका कारण निकै कमजोर भएकी महिला एलिजाले ल्याएको ति सामान देखेर निकै भावुक भइन् । आफुले पनि खान नपाएका कारण सुत्केरी महिलाको दुध पनि आएको छैन । जसका कारण भर्खर जन्मेको बच्चाले आमाको दुध पेटभरी खान पाएको छैन ।
यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएपछि एलिजाले अरुको पनि ध्यान आकर्षीत होस् भनेर आफु सहयोग लिएर पुगेको बताइन् । मैले एक्लै गरेर केही हुने होइन,अरुले पनि यो देखेर सहयोग गर्नुहोला भनेर मैले लिएर आएको हो,उनले भनिन्,सुत्केरी भएको बेलामा पोषिलो खानुपर्ने महिला भोकै बस्नुपर्दा निकै कठिन हुन्छ । एलिजाले निरास भएकी महिलालाई निकै साहस दिएकी छन् । काखमा भएको बच्चाको भविष्यको लागि पनि आफुले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन उनले दिइन् ।
यस्तो अवस्थामा छोडेर हिड्ने श्रीमानका लागि भने उनले निकै दुख ब्यक्त गरिन् । कस्तो कठोर मन हो ? उनले भनिन्, केही दिन नजिक भएका ब्यक्तिलाई त निकै माया लाग्छ तर जिवनभर साथ दिने भनेर विवाह गरेर ल्याएको श्रीमतीलाई गर्भवती भएको बेलामा छोडेर कसरी हिडन् सकेका होलान् उनका श्रीमान? यस्तो अवस्थामा छोडेर जाने श्रीमानलाई कारवाही हुनुपर्ने पनि एलिजाले बताइन् ।
उनले श्रीमान संगै नबसेपछि बच्चाहरुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताइन् । महिलालाई निकै साहस दिँदै भनिन्,अलि कडा हुनुस्, प्रेसरको विरामी हुनुहुँदो रहेछ बच्चाको भविष्यका लागि अब निकै कठोर भएर बाँच्नुपर्छ । उनले महिलालाई साहस दिँदै भनिन। समाजमा संघर्षशिल महिलाले एक्लै हुर्काएका सन्तानले देश र आफ्नो नाम राखेका थुप्रै उदाहरण छन् त्यसैले बच्चाको मुख हेरेर आफ्नो ख्याल गर्न उनले सुझाव दिइन् ।
दोस्रो बच्चाको तयारीमा धुर्मुस सुन्तली